Margarekha » जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा बडाध्यक्ष सहित ६ जनाको मृत्यु
जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा बडाध्यक्ष सहित ६ जनाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : ५ महिना अगाडि
जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा आज जीप दुर्घटना हुँदा बडाध्यक्ष सहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ । एक जना बेपत्ता भएका छन् । एक जना गंभिर घाईते भएका छन् । जाजरकोट खलंगाबाट जुनीचाँदे तर्फ गैरहेको भे १ ज ९३५ नम्बरको जीप जुनीचाँदे गाँउपालिका वडा नम्बर. १ औलभीरमा दुघर्टना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा जुनीचाँदे गाँउपालिका वडा नम्बर. ११ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही, साेहि वडाकै ६२ बर्षिय कृतिबहादुर शाही , लालबहादुर बुढा र सोही वडाका स्वास्थ्यकर्मी ३२ बर्षिय खेमराज शाहीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ५ गर्खाकोटका २९ बर्षिय कृष्णबहादुर शाही र मटेलाकी २५ बर्षिया मालिका बस्नेतको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए । एक जना मजकोट खोलामा बेपत्ता भएका छन् ।
वडा नम्बर ११ का नरबहादुर बुढा गंभिर घाईते भएका छन् । उनको उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम खलंगा ल्याईदैछ । औलभीरबाट खसेको गाडी करीव दुई सय मिटर तल रहेको मजकोट खोलमा परेको थियो । अहिले गाडी खोलामै छ । वडाध्यक्ष शाहीको सव मात्र निकालिएको छ । घटनास्थल सदरमुकाम खलंगा देखि २० कोष पश्चिम पर्दछ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघले भैँसी चराउन गएका एक पुरुषलाई झम्टेर लग्याे
साेमबार मात्रै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघले भैँसी चराउन गएका एक पुरुषलाई झम्टेर लगेको छ । बर्दिया राजापुर नगरपालिका १० का वृद्धलाई बर्दिया राष्ट्रिय...
ग्रामिण भेगका व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्दछौं : लोकतान्त्रिक समूह
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको फागुन २२ गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेस समर्थक लोकतान्त्रीक समावेशी व्यवसायी समूहले आफ्नो निवार्चन अभियानलाई...